Nnukwu akwara ndị America na-agbanye mgbanaka dị n'ime
Nnukwu oghere a na-eme mkpọchi America na nwere mgbanaka dị n'ime nwere akụkụ abụọ bụ isi, nke bụ nnukwu ụdị ejiji America na-eme ka ọ bụrụ mmachi na mgbaaka ime. A na-eji mgbanaka dị ọcha mee nke nwere ezigbo igwe anaghị agba nchara ka ọ dị ọcha iji hụ na ọfụma na ijiri ike.
Mgbe niile iyi iyi iyi
Ngwakọta egwu iyi oge ochie nwere ụdị bandwidth abụọ, nke bụ 14.2mm na 15.8mm, bandwidth 14.2mm nwere ụzọ abụọ dị n'oge opupu ihe ubi, yana 15.8mm bandwidth nwere paịlị 5 nke pọọsụ.
American ịhapụ hose mwekota
American ngwa ngwa hose mwepu mmachi bandwidth bụ 12mm na 18.5mm, Nwere ike itinye ya nke ọma na sistemụ mechiri emechi nke a ga-emepere maka nrụnye.
14.2mm American ụdị sooks mwepu
Mgbachi a bụ ụdị nkwalite nke ụdị ndị America nkịtị, yana bandwidth nke 14.2mm, na ike ya dị elu karịa nke ụdị ndị America nkịtị.
12.7mm American ụdị sooks mwekota aka
12.7mm American ụdị sooks mwepu na aka bụ otu ihe ahụ dị ka nke 12.7mm American ụdị sooks mwepu. A na-eji akwa siri ike mee ya, mana enwere mgbakwunye na sọọsọ ahụ. Aka ahụ nwere ụdị abụọ: nchara na plastic.Handle agba nwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
12.7mm American ụdị sooks mwepu
A na-eji ihe a siri ike mee ihe siri ike, ọ nwekwara ike ịhazi ya dịka nha chọrọ onye ahịa ahụ dị. Aredị abụọ nke kposara a: ihe nkịtị na ịlọghachi.
8mm American ụdị sooks mwepu
Obere mwepu ndi America nwere naanị otu bandwid 8mm.Itinye ya na ngwongwo di nfe, choro 2.5NM nke iyi. Mgbachi a nwere ike inye ojiji a pụrụ ịdabere na ya ma na-adịgide adịgide, nwere ike inye nrụgide dị elu. Ihe nkedo ahụ nwere akụkụ isii na 6.3.
American ụdị arọ ọrụ mwekota
Typedị ụdị ihe eji emechi ihe mgbakwunye ndị America nwere bandwidth nke 15.8mm ma ọ bụ ihe mkpuchi nwere akụkụ anọ nwere ike ibufe ụda ike na eriri nwere oghere. Na mgbakwunye na nha dị na tebụl ahụ, enwere ike ịhazi ya dịka nha chọrọ onye ahịa chọrọ.